Ho lavitr'ezaka ny tolona? | Hevitra MPANOHARIANA
Ny tombotsoan'ilay tsaho ve? Hampikoropaka ny HAT.
Nampidirin'i Su @ 02:21, 2009-06-06 [Valio]
Lozanao tokoa ry Jentilisa fa asa raha mba azonao an-tsaina ny akon'izay lazainao sy ny fahanginanao eto ary asa raha mba azonao sary an-tsaina hoe hatraiza no ahatongavan'izany: hatrany amparavazan-tany!
Fa soa fa misy ianao mampita vaovao, toy ny hoe mivoaka io raki-pahalalana io fa tsy mba nahalala izahay raha tsy izany, raha asianao pejy manokana momba azy io mety hifandrombahan'ny malagasy any ivelany izy io satria ny tsy fahalalana ny fisiany akory no antony voalohany tsy hahalafosana azy io.
Mirary soa mandrakariva.
Nampidirin'i gasi @ 06:56, 2009-06-06 [Valio]
ahoana kay no ahafahako mandefa tahirin-kevitra mety hahaliana anao misy tovana .pdf ?
Tsy ho taratasim-pitiavana akory fa aza matahotra ianao :-) Io azoko lazaina anao eto :-)
Nampidirin'i gasi @ 06:59, 2009-06-06 [Valio]
afaka mandefa mailaka amin'ny ny_jentilisa@yahoo.fr ianao raha tsy manahirana anao na tahaka ny ahoana ihany koa re?
Nampidirin'i jentilisa @ 07:27, 2009-06-06 [Valio]
misaotra @ adiresy, fa mba nisy fotoana nijerijerena tetsy sy teroa aho ka nahita fa efa misy eto amin'ny bolongana kay ilay tahirin-kevitra noheveriko fa tonga amin'ny alala'ny mailaka fotsiny : http://gasytiatanindrazana.free.fr/tmp/CR%20Ass-Nat%20-mai%2009.pdf
Rehefa misy hafa manaraka halefako eo ihany izany.
Nampidirin'i gasi @ 07:34, 2009-06-06 [Valio]
Miarahaba anao indray ry Jentilisa. Tena efa nisahotaka ny taty an-dafy. Dia faly mamaky ny vaovao avy any an-tanidrazana indray.
Nampidirin'i Mpitolona @ 09:01, 2009-06-06 [Valio]
Aiza i Jentilisa
Nalefanareo taiza i Jentilisa fa tsy izy mihintsy io manoratra io !!!!!!!!!!!!!!!
Nampidirin'i Mpitolona @ 12:01, 2009-06-06 [Valio]
izy io fa niova style ooo
Nampidirin'i jentilisa @ 15:36, 2009-06-06 [Valio]
mba manoratà anie email ho ahy ry Jentilisa, io ny emailadresiko. Misaotra mialoha
Nampidirin'i Jaona @ 20:39, 2009-06-07 [Valio]
Tsy mahita ny adiresinao aho fa any amin'ny globalvoices teny malagasy manoratra ny adiresinao aty amiko dia valiako amin'izay tianao ho fantatra ianao.
Nampidirin'i jentilisa @ 21:45, 2009-06-07 [Valio]
Mankasitraka lesy rajentilisa amn'ny le fanehoan-kevitra ! satria izahay aty amin'ny faritra dia tsy maharaka vao2 marina sy ny zava-misy marina.Misaotra e !
Nampidirin'i manda @ 07:30, 2009-06-09 [Valio]